Khudaar iyo baradho ka badan ayaa laga soo aruuriyay Crimea marka loo eego 2019 - Nidaamka Baradhada
Jamhuuriyadda Crimea, 20% khudaar badan iyo 18% baradho ka badan ayaa la goostay marka loo barbardhigo isla muddadaas 2019. Tan waxaa ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka golaha wasiirada - wasiirka beeraha jamhuuriyada Kazakhstan Andrei Ryumshin. Raiisel wasaare ku xigeenka ayaa cadeeyay in maanta in ka badan boqol kun oo tan oo khudradda dhulka ka furan ah iyo 12 kun tan oo ah dhul la ilaaliyay la goostay.
“Sannadkii hore, beeralayda reer Crimea waxay soo goosteen 83 299 tan oo khudradda dhulka ka furan ah iyo 8165 tan oo lagu koriyo ah taariikhdaas. Wadarta guud ee lagu beeray khudaarta dhulka furan sanadka 2020 waa 6567,6 hektar, oo ka hooseysa baradhada - 3892 hektar, ”ayuu qeexay Andrey Ryumshin.
Gudoomiye Ku Xigeenka Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale xusay in wadarta guud ee baradhada maanta ay gaareyso 50 650 tan.
“Sannadkii hore, isla taariikhdaas ayaa la ururiyay 42 tan. Kororka waxsoosaarka guud wuxuu sabab u yahay kororka acreage, "Ra'iisul wasaare kuxigeenka ayaa carabka ku adkeeyay.
Source: Wasaaradda Beeraha ee Jamhuuriyadda Crimea
Tags: Jamhuuriyadda Crimeagoosashada baradho